ဒီကနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ဦးအောင်ကိုလတ်ရဲ့ မွေးနေ့မှာ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ကျော်ထက်အောင် – Cele Posts
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီလ (၁၀)ရက်နေ့ ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် အဆိုတော် ဒါရိုက်တာ ဝါရင့် အနုပညာရှင်ကြီး ဦးအောင်ကိုလတ်ရဲ့ မွေးနေ့ ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်လေး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေး မှာတော့ ပရိသတ် အချစ်တော် ဦးအောင်ကိုလတ်က အသက် (၆၇)နှစ်ပြည့်မြောက် သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဦးအောင်ကိုလတ်ရဲ့ မွေးနေ့ရက်လေး အတွက်ကို သားတပည့်လို ချစ်ခင်ရတဲ့ ကျော်ထက်အောင်ကလည်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်း တွေတောင်းပေးထားတယ်။”Happy Birthday my dear Daddy! DaDa!. Be healthy. Be happy. Be more success!. Love you !Your sons!” ဆိုပြီး သတိတရနဲ့ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Happy Birthday ပါ ဦးအောင်ကိုလတ်ရေ။ အနုပညာ လောကမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို ပိုမိုရရှိနိုင်ပါစေလို့ ကနေ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်တောင်း ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးတွေလည်း ဦးအောင်ကိုလတ် ရဲ့မွေးနေ့ အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်း တွေတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦး ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
Source:Kyaw Htet Aung’ fb
ဒီကနမှေ့ာ ကရြောကျတဲ့ ဦးအောငျကိုလတျရဲ့ မှေးနမှေ့ာ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျတဲ့ ကြျောထကျအောငျ
ပရိသတျကွီးရေ ဒီနေ့ ဇနျနဝါရီလ (၁၀)ရကျနေ့ ကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျော အဆိုတျော ဒါရိုကျတာ ဝါရငျ့ အနုပညာရှငျကွီး ဦးအောငျကိုလတျရဲ့ မှေးနေ့ ကရြောကျတဲ့ နရေ့ကျလေး ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီနှဈရဲ့ မှေးနရေ့ကျမွတျလေး မှာတော့ ပရိသတျ အခဈြတျော ဦးအောငျကိုလတျက အသကျ (၆၇)နှဈပွညျ့မွောကျ သှားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ဦးအောငျကိုလတျရဲ့ မှေးနရေ့ကျလေး အတှကျကို သားတပညျ့လို ခဈြခငျရတဲ့ ကြျောထကျအောငျကလညျး သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ မှေးနဆေု့မှနျကောငျး တှတေောငျးပေးထားတယျ။”Happy Birthday my dear Daddy! DaDa!. Be healthy. Be happy. Be more success!. Love you !Your sons!” ဆိုပွီး သတိတရနဲ့ မှေးနဆေု့မှနျကောငျးတောငျးပေးထားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
Happy Birthday ပါ ဦးအောငျကိုလတျရေ။ အနုပညာ လောကမှာ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုကို ပိုမိုရရှိနိုငျပါစလေို့ ကနေ မှေးနဆေု့မှနျကောငျတောငျး ပေးလိုကျပါတယျ။ ပရိသတျကွီးတှလေညျး ဦးအောငျကိုလတျ ရဲ့မှေးနေ့ အတှကျ မှေးနဆေု့မှနျကောငျး တှတေောငျးပေးခဲ့ကွပါဦး ပရိသတျကွီးတို့ရေ။ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော။
အဖြူရောင် သတို့သမီးဝတ်စုံလေး ဝတ်ပြီး ချစ်သူကို ချစ်စကားလေးတွေ ပြောလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း